अभिनेत्री श्वेता तिवारीविरुद्ध २ करोडको मानहानी मुद्दा
भारतीय टिभीकी चर्चित अभिनेत्री श्वेता तिवारी अक्सर चर्चामा रहने गर्दछिन् । यो पटक उनको चर्चाको विषय पूर्व कर्मचारी राजेश पाण्डे भएका छन् । राजेशले उनलाई धोका दिएको आरोप लगाउँदै २ करोड (भारतीय रुपैयाँ)को मानहानीको मुद्दा समेत हालेका छन् ।
माधव नेपालतिर लाग्नेलाई चुनावमा टिकट पक्का
म्यानमारमा सेनाद्वारा एकैदिन ८० जनाको हत्या
वीरगंजमा पनि एमाले दुई चिरा
मन्त्री बन्न ओलीतिर लागेका कृष्णभक्त हिस्स !
बिस्केट जात्राको रथ तान्दा ढुङ्गा हानाहान : १९ जना घाइते
ओलीका भतिजाले लगाए सुकुम्बासीको उठीबास : बस्ती भत्काएर सपिङ्ग कम्प्लेक्स !
ओली–ठाकुरबीच एक वर्ष देखि यसरी बढ्यो निकटता